Airlines on High Alert as Virus Outbreak Spreads | Myanmar Business Today
Home Business Regional Airlines on High Alert as Virus Outbreak Spreads
Passengers wearing masks are seen at the terminal hall of the Beijing Capital International Airport in Beijing, China, January 23, 2020.
Cathay cut nearly 40 percent of its flights and reportedafinancial loss, as did Singapore Airlines, Japan Airlines and ANA.
For example, in Australia, Chinese travelers account for more than 15 percent of international arrivals, up from just4percent in 2003, according to Moody’s ratings service.
Those travelers, who arrive mostly via mainland carriers, often take domestic flights once they arrive in Australia, pointing to the potential for knock-on effects for the likes of local airline Qantas Airways if there isafall in travel demand.
Many airlines, including Korean Air Lines, Singapore Airlines’ budget carrier Scoot, Taiwan’s China Airlines and Japan’s ANA, announced they were canceling flights in and out of Wuhan after authorities announcedalockdown.
South Korean budget carrier T’way Air last week postponed the scheduled launch ofanew route to the city.
Wuhan’s Tianhe airport serves around2percent of China’s total air traffic and mainly serves domestic routes. Broker Jefferies estimated 88.8 percent of overall flights are domestic, with China Southern Airlines holding the largest market share at 30 percent.
Are Passengers Canceling Trips to China?
Hanatour Service Inc., South Korea’s largest travel agency, said that cancellations of trips to China increased about 20 percent last week compared to the same period last year. The figure includes postponements and switches to other destinations,acompany official said.
Rajeev Kale, country head for Thomas Cook India’s holidays division, said some customers were raising concerns about traveling to China. “Most of our customers are adoptingawait-and-watch approach to see further developments,” he said.
လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ခရီးသည်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ပြန့်နှံ့လာသော တုပ်ကွေးပုံစံ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားဆောင်ရွက်နေကြသည်။
အကြီးမားဆုံးသော စိုးရိမ်မှုမှာ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်က ကပ်ရောဂါသဖွယ်ဖြစ်လာပါက ခရီးသွားလာမှု ထိုးကျသွားမည်ကိုပင်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် SARS ‌ရောဂါဖြစ်ဖြစ်ပွားစဥ်က အာရှတွင် လေယာဥ်ခရီးသွားလာမှုသည် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြောင်း International Air Transport Association (IATA) မှ သိရသည့် အချက်အလက်များအရသိရသည်။
Cathay ဆိုလျှင် လေယာဥ်ခရီးစဥ်များ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချခဲ့ပြီး ‌ငွေကြေးအရ အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတူ Singapore Airlines၊ Japan Airlines နှင့် ANA တို့သည်လည်း လေယာဥ်ခရီးစဥ်များကို လျှော့ချခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် လေကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ တရုတ်ခရီးသည်များအပေါ်တွင် ပိုမိုမှီခိုနေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသည်များအနက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ တရုတ် ခရီးသည်များဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့သည်။
ပြည်မကြီးမှ လာသည့် လေယာဥ်များကို စီးနင်းလျက် ရောက်လာသည့် အဆိုပါ ခရီးသည်များသည် သြစတြေးလျသို့ ရောက်သည့်အခါတွ၊င် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများကိုသာ စီးကြသည်ဖြစ်ရာ တရုတ်ခရီးသွား ကျဆင်းခြင်းက ‌Qantas Airways ကဲ့သို့သော ပြည်တွင်း‌ လေကြောင်းလိုင်းများကို သက်ရောက်မှု ရှိလာသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်အထိ လေကြောင်းခရီးသည်အရေအတွက်သည် နှစ်ဆမျှ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားဈေးကွက်တွင် ပြည်ပသို့ ခရီးသွားလာမှု အများဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ လူပေါင်း ၆ဒသမ၈ သန်းသာ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းများကို စီးနင်းသွားလာခဲ့ကြသော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၆၃ဒသမ၇ သန်းမျှအထိ ဆယ်ဆ တက်လာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့လေကြောင်းကဏ္ဍသည်လည်း ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၃၂၂ ဘီလီယံသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃၈ ဘီလီယံအထိ နှစ်ဆမျှ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များက ဝူဟန်မြို့ကို ပိတ်ချလိုက်ပြီးနောက်တွင် Korean Air LInes၊ စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်း Scoot၊ ထိုင်ဝမ်၏ China Airlines နှင့် ဂျပန်၏ ANA အပါအဝင် လေကြောင်းလိုင်း တော်တော်များများမှာ ဝူဟန်သို့ သွားမည့် ခရီးစဥ်များ၊ ဝူဟန်မှ ပြန်ထွက်လာမည့် ခရီးစဥ်များကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ လေကြောင်းလိုင်း T’way Air သည် ပြီးခဲ့သည့် ဝူဟန်မြို့သို့ ပြေးဆွဲရန် စီစဥ်ထားသော ခရီးစဥ်ကို ‌ရက်ရွှေ့ခဲ့သည်။